Bhatiri reApple Watch Series 4 rine hunyanzvi hwakanyanya | Ndinobva mac
Iyo Apple Watch Series 4 haisati yasvika kune vese vashandisi vakaichengeta asi iyo network yemasaiti iri kuratidza data kuti izvo zvavachaita kuwedzera kutenga nevashandisi. Tinodaro nekuti kunyangwe nedengue Nhepfenyuro dzeApple 4 ine saizi mamirimita mashoma yakakura, iyo 42mm kuva 44mm uye iyo 38mm inova 40mm, bhatiri rayo haina kukura.
Iyo Apple Watch Series 4 yakabva yawedzera madhigonals ayo anogona kutiita kuti tifunge kuti bhatiri rayo raizokura, asi sezvo wachi yakatetepa muukobvu, izvo zvatinazvo zvakapesana, tine bhatiri diki pane muApple Watch Series 3 asi kuti inoshanda zvekuti inogara zvakafanana neiyo yapfuura.
Iyo bhatiri yeiyo nyowani yeApple Watch Series 4 ine inguva inofungidzirwa yemaawa gumi nesere seye Series 18. Izvi zvinogona kutiita kuti tifunge kuti bhatiri rakaiswa paWatch nyowani zvakangofanana neiyo yapfuura modhi, asi zvinoenderana neIFixit haina kudaro uye vatiratidza mifananidzo inotiratidza kuti idiki.
Saka zvinoita sei kuti vagare zvakafanana? Apple yakagadziridza iyo sisitimu kuti nesimba shoma isu tigone kuita zvirinani.
Iyo Watt-Hora ruzivo zvakapihwa zviri pamutemo neApple pachayo ndeyake Nhepfenyuro dzeApple 4 44mm 1,12 Watt-Maawa maringe ne1,34 yeChitatu 3 42mm. Kana iri Nhepfenyuro dzeApple 4 ye40mm isu tine 0,86 Watt-Maawa tichienzanisa neiyo iyo Nhepfenyuro dzeApple 3 38mm (1,07 Watt-Maawa).
Kufunga izvi, bhatiri idzva Apple Yekuteedzana 4 ndeye 20% yakaderera pane yeiyo Series 3, izvo zvinoita kuti tifunge kuti bhatiri idzva uye nesisitimu inoshanda zvakanyanya. Uri kumirira yako Apple Watch Series 4?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple Watch Series 4 bhatiri inoshanda zvakanyanya
Zvino zvatave neKeKKit paMac yedu, tichaenda kunoona zvigadzirwa zvakati wandei